Fitafi Madagasikara - Nizara fanomezana ho an'ny ankizy sahirana miisa 40 eny Antanimenakely
Fitafi Madagasikara – Nizara fanomezana ho an’ny ankizy sahirana miisa 40 eny Antanimenakely
Publié décembre 14, 2020 par Book News
Ankatroky ny krismasy isika amin’izao. Manoloana izany dia nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana ireo ankizy miisa 40 sahirana eo anivon’ny « Centre FIFASAF » ny Fikambanana Fitafi Madagasikara.
Nizara fanomezana ho an’ny ankizy sahirana ny Fitafi Madagasikara
Ankizy sahirana manodidina ny 40 sy tokantrano sahirana miisa 15 no nozarain’ny fikambanana Fitafi (Firaisankinan’ny Tanora Andrin’ny FIrenena)fanomezana teny amin’ny “Centre FIFASAF” Antanimenakely Ampitatafika ny Sabotsy 12 desambra 2020 teo. Manoloana izao fotoana fiavian’ny Krismasy izao moa nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana ireo ankizy miisa 40 sahirana eo anivon’ny « Centre FIFASAF » ny fikambanana.
Nanome fitafiana azy ireo ny fikambanana. Ankoatra izay dia nizara vary 1 kilao sy siramamy 1 kilao ary menaka 1litatra avy ho an’ny tokantrano sahirana miisa 15 teny Antanimenakely Ampitatafika. Fanomezana izay avy amin’ny Masoivohon’i Suisse eto Madagasikara. Ity farany izay tonga teny an-toerana rahateo niaraka tamin’ny fianakaviamben’ny Fitafi nizara ireo fanomezana ho an’ny olona sahirana. Tanjona ny mba hanamaivanana ny fahasahiranana izay mianjady amin’ireo tokantrano marefo ireo, indrindra amin’izao vanimpotoana sarotra lalovan’ny Firenena izao.
Tsy hatreo ihany fa mbola hitohy any Moramanga izao hetsika ara-tsosialy karakarain’ny Fitafi Madagasikara izao izay hiarahana miasa amin’ny Masoivohon’i Suisse eto Madagasikara. Tsara ny manamarika fa tafiditra ao anatin’ny sehatra hiasan’ny fikambanana Fitafi ny fanampiana ara-tsosialy tahaka izao. Ankoatra izay dia misehatra amin’ny lafiny fanabezana, fanajana ny zon’olombelona ary ny fampandrosoana maharitra ny fikambanana Fitafi Madagasikara.